सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ल्यायो ‘सूर्या चौरासी पूजा’ जीवन बीमा योजना — Arthatantra.com
Arthatantra.com > बीमा > सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ल्यायो ‘सूर्या चौरासी पूजा’ जीवन बीमा योजना
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ल्यायो ‘सूर्या चौरासी पूजा’ जीवन बीमा योजना
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘दीर्घ जीवन, समृद्ध भविष्य’ बीमा योजना ल्याएको छ । इन्स्योरेन्सले ‘सूर्या चौरासी पूजा’ नामक जीवन बीमा योजना ल्याएको हो ।
बीमितको उमेर चौरासी वर्ष पुग्दासम्म रक्षावरण प्रदान गर्ने ‘सूर्या चौरासी पूजा’ बीमा योजनाले बीमाङ्कको २५० प्रतिशतसम्म बीमा कभर प्रदान गर्दछ । यस योजना अन्तर्गत बीमितले बीमाशुल्क भुक्तानी अवधि पश्चात एकमुष्ठ आर्जित वोनस प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यसपछि निजको उमेर ८३ वर्ष नपुग्दासम्म बीमाङ्कको ६ प्रतिशतका दरले र्वािर्षक पेन्सन समेत प्राप्त हुनेछ ।
बीमितको उमेर ८३ पुरा भई ८४ मा प्रवेश गर्दा बीमितलाई बीमाङ्कको १५० प्रतिशत रकम बीमा वापतको अन्तिम भुक्तानी प्राप्त हुनेछ र त्यो रकमबाट बीमितले निजको चौरासी पूजा उत्सवका रुपमा धुमधामका साथ मनाउन सक्नेछन् ।
‘सूर्या चौरासी पूजा’ बीमा योजना १६ वर्ष देखी ६० वर्षसम्म उमेरका व्यक्तिहरुले १० देखी ५० वर्षसम्मको बीमाशुल्क भुक्तानी अवधिका लागि खरीद गर्न सक्नेछन् । न्यूनतम १ लाख रुपैयाँ बीमाङ्क तोकिएको यो बीमा योजना एकल भुक्तानी तरिकामा समेत उपलब्ध रहेको छ । बीमा प्रारम्भको दुई वर्षपछि बीमा अवधिभर बीमा समर्पण र बीमालेख धितोमा कर्जा सुविधाको समेत व्यवस्था रहेको छ ।
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीका साथै कम्पनीका संस्थापक शेयरधनी विवेक झा र कम्पनीका अध्यक्ष केशव प्रसाद भट्टराईले संयुक्त रुपमा ‘सूर्या चौरासी पूजा’ बीमा योजनाको सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले सोही कार्यक्रममार्फत शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान गर्नुका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत निःसहाय सेवा सदन, शान्तिनगरलाई सहयोग प्रदान गरेको छ ।
२०७७ फागुुण ७ गते १५:३१ मा प्रकाशित
वायुसेवा संचालक संघले बढायो हवाई इन्धनको मूल्य, कहाँको कति ?
बजेटको सही विनियोजन र खर्च क्षमता अभिवृद्धिमा जोड रहने छ : आर्थिक सल्लाहकार दुगड
आकासियो अण्डा र मासुको मूल्य, कति वृद्धि ?
अपडेट काँग्रेस : समावेशी २२ मा देउवाको १४, खुल्लामा पनि अगाडी
भोलिदेखि ‘कर्फ्यु’ जारी गर्ने निर्णय !